के–के भयो मन्डिखाटारमा ? कोइराला परिवारको विरासत फर्काउने अठोट – Online National Network
के–के भयो मन्डिखाटारमा ? कोइराला परिवारको विरासत फर्काउने अठोट
३ माघ २०७४, बुधबार ०३:२४
काठमाडौं, ३ माघ – कांग्रेसमा कोइराला परिवारका तीन नेताले ‘विरासत’ फर्काउने उद्घोष गरेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक, सुुजाता र डा. शेखरबीच मंगलबार भएको भेटमा पार्टीमा पुनः कोइराला परिवारको शक्ति फर्काउने विषयमा कुराकानी भएको थियो ।
गत ४ साउनमा कांग्रेस महामन्त्री शशांकको टोखास्थित निवासमा एकसाथ पहिलोपल्ट राजनीतिक विषयमा कुराकानी गरेका तीन नेताले सात महिनापछि अब सशक्त ढंगले पार्टीमा प्रस्तुत हुने सहमति गरेका छन् । मंगलबार गिरिजापुत्री सुजाताको मण्डिखाटारस्थित निवासमा शशांक र शेखर कोइरालाले खानासहित तीन घन्टा छलफल गरेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
नेता शेखर भ्रातृ संगठनका अराजकताको समस्या पहिचान गरी समाधान लाग्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, पार्टी हारबारे जान्न र बुझ्न कारण खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पार्टीमा कमजोरी भएका छन्, तर यसको कारण खोज्न जरुरी छ,’ शेखर भन्छन्, ‘कसैलाई आरोप नलगाई कसबाट गल्ती भयो ? समीक्षा हुनुपर्छ ।’
आफ्नो पक्षमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ
पछिल्लो केही दिनयता पौडेल, प्रकाशमान, सिटौला र केसीसहितका नेताहरू संवादमा छन् । यी नेताहरूले कोइरालाविरुद्ध अर्को समूह खडा गर्दा उनीहरूलाई थप असहजता हुनेछ । नेतृत्वमै दाबी गर्न पहिलो तीनमध्ये एकमा सहमति गर्न र दोस्रो देउवालाई टक्कर दिने गरी उपगुटलाई विश्वासमा लिन पनि कोइरालाहरूलाई सहज छैन । १३औँ महाधिवेशनमा सभापतिमा लडेर नेता पौडेल पराजित भएका थिए । अब नेतृत्वकै लागि पौडेलले दाबी गर्ने विषय बाहिर आएको छैन । तर, नेता प्रकाशमान सिंहले कोइरालानिकटबाहेकका नेताको छुट्टै गुट बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको चर्चा कांग्रेसमा छ ।